တဦးတည်းစာရွက်ပေါ်တစ်စားပွဲရှည် print ထုတ်မှ Excel, နဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကြီးမားတဲ့ဖောင်နှင့်အတူဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
program ကို Excel ကိုအစီအစဉ်တဦးတည်းစာရွက် features တွေအပေါ် print ထုတ်မှစားပွဲပေါ်မှာ Excel မှသင်မည်သို့ဆိုအဆင်ပြေ format နဲ့စားပွဲပေါ်မှာ print ထုတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ မာတိကာ: ဘယ်လိုအခြားစားပွဲရှည်နှင့်သင်စကေးဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်, အတစ်ခုတည်းစာရွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ဖို့စားပွဲ Excel လုပ်နည်းသိရန်အရေးကြီးသောကြောင်း Excel ကိုအတွက်ပုံနှိပ်ခြင်းအင်္ဂါရပ်များပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်တစ်ခုတည်းစာရွက်စားပွဲပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ဖို့ဘယ်လိုပေါ်ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်အဆင့်? ဤလျှောက်လွှာကိုအများဆုံး default အနေဖြင့်သူတို့ကိုအသုံးချ, ဒါပေမယ့်ဒီအစဉ်အမြဲအားလုံး၎င်း၏စွမ်းရည်များသတိထားမဟုတ်ပါ, ဖြစ်ကောင်းလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်မကြာခဏကခက်ခဲအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်လေ့လာနေဘို့လိုအပ်သောအခြေခံအကျဆုံးလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ရှာပါ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ပဲထက်ပိုပေမယ့်။ သငျသညျထို program တစ်ခု resolution နဲ့ XLS ဖိုင်တွေလည်ပတ်ကြောင်းသိ? ဒေတာအားလုံးကိုမှန်ကန်စွာထဲသို့ဝင်စီကော်လံထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ကြောင်းသေချာစေရန်ပုံနှိပ်ရှေ့၌သင်တို့စားပွဲပေါ်မှာစစ်ဆေးနောက်တဖန်စတင်ရန်တယောက်စာရွက်ပေါ်စားပွဲတစ်ခု print ထုတ်မည်သို့ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်အဆင့်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း ဆက်လက်. ဆက်လက်ဆောင်ရွက်: သင် print ထုတ်ချင်သောစာရွက်ပေါ်တွင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ယခုတွင်သင်သည်စာမျက်နှာ Layout tab မှာရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ pop-up window ကို 's Page Setup ကို။ ဒီပြတင်းပေါက်များတွင်စကေးနှင့်စာမျက်နှာအရွယ်အစားကိုရှာပါ။ သငျသညျစံအယ်လ်ဘမ်စာရွက်ထက်ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားလိုအပ်ခဲ့လျှင်, 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုထက် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့တန်ဖိုးအတိုင်းအတာအပေါ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီထက်အသီးသီးနှင့် 100 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရာခိုင်နှုန်းပါ။ ထို့နောက်အတူတူဝင်းဒိုးကို 's Page Setup ကိုအတွက်, သငျသညျ Excel ကိုအတွက်စာရွက်စာတမ်းများပုံနှိပ်ချင်မည်မျှစာရွက်များကိုသတ်မှတ်။ ဤကိစ္စတွင်ဦးတည်း၌တည်၏။
သငျသညျသတ်မှတ်ထားသောအတိုင်းအတာရှိနေသော်လည်းအကျိုးစီးပွားအကောင်းဆုံးများထဲမှစာရွက်ပေါ်မှာနေရာချနိုင်ဖို့အတွက်စာရွက်စာတမ်း၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်. တိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းစေခြင်းငှါ, သတိပြုပါ။
/ preview ကို / စာမျက်နှာ / စာရွက်သို့ရောက်နှင့် kolichepstvu စာမကျြနှာဖွငျ့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရာခိုင်နှုန်းကဲ့သို့ရှိ nastraivash သို့မဟုတ်။ ငါကြီးမားတဲ့ဖောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေစိတ်ပျက်ဖို့ဝံ့
၂၀၀၇ ဗားရှင်းတွင် Page Layout pane သို့သွားပါ။ စာမျက်နှာရွေးစရာများ (ညာဘက်ထောင့်ရှိအိုင်ကွန်လေးတစ်ခု) - gt; စကေးမီနူးတွင်နောက်ထပ်နေရာမထားပါနှင့် ... - gt; ပထမ ဦး စွာတန်ဖိုးများကို 2007 နှင့် 11 ထားပါ။ ထို့နောက် Preview ဖြင့်စစ်ဆေးပါ။ အခြားအရာအားလုံးနှင့်မကိုက်ညီပါကမီနူးရှိတန်ဖိုးများနှင့်ကိုက်ညီသည်အထိပြောင်းလဲပါ။
အတန်းအရေအတွက်လား အကြီးဆုံးသောပုံနှိပ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ ဒါ ... ဖိုင် - စာမျက်နှာသတ်မှတ်ချက်များ ... စာမျက်နှာ။ ဒီ tab ထဲမှာ, 1x1 ထက်ပိုသောစာမျက်နှာများမထားရန်နှင့် print ထုတ်ရန်ကန့်သတ်ထား!
ဟုတ်ကဲ့ကြီးမားတဲ့စားပွဲ kapets, သင် setting များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်ပြုလုပ်ဖြစ်စေဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ထပ်မံလျော့ကျစေပါတယ်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ကော်လံသို့ကိုက်ဖြတ်။ အဘယ်အရာကို ????
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,228 စက္ကန့်ကျော် Generate ။